Umshini omncane wokupakisha iqanda epulazini
Umshini wokupakisha iqanda elincane laseMintai usetshenziswa kabanzi emapulazini enkukhu (noma edada) nasezitshalweni zokucubungula amaqanda. Uma unezinye izidingo, ingafakwa i-washer yeqanda, isomisi seqanda, ikhandlela, noma i-egg grader ndawonye. Nciphisa izindleko zabasebenzi. Yenzelwe izici ezilula, ezinokwethenjelwa, eziguquguqukayo futhi ezinamandla, okulula ukuyisebenzisa nokugcina.
UMKHIQI WOKUPHAKELA AMAQANDA
Umshini wokupakisha amaqanda we-Mintai usetshenziswa kabanzi emapulazini enkukhu (noma edada) nasezitshalweni zokucubungula amaqanda. Yikuphi efanelekayo izinhlobo ezahlukene emathileyi impahla. Nciphisa izindleko zabasebenzi futhi uthuthukise ukusebenza kahle komsebenzi. Yenzelwe izici ezilula, ezinokwethenjelwa, eziguquguqukayo futhi ezinamandla, okulula ukuyisebenzisa nokugcina.
Umugqa wokukhiqizwa kwamaqanda abilayo we-MT-201
Umugqa wokukhiqizwa kweqanda elibilayo ne-MT-201 yinkampani yethu ezimele yocwaningo nentuthuko yomkhiqizo wethu iMin Tai, isethi yomugqa wokukhiqiza wokuhlola okuzenzakalelayo kokukhanya, ukuhlanza, amaqanda, ukubilisa, ukubilisa, ukupholisa, ukuxebuka, ukukha, ukubala okuzenzakalelayo, ukupheka, ukumisa kanye eminye imisebenzi, njengamanje ubuchwepheshe obuphambili kakhulu, obusekela umugqa ophelele wokukhiqiza wokukhiqiza amaqanda ophelele kakhulu, ovuthiwe kakhulu.
Umshini wokuqhekeza amaqanda wokuzenzakalela ukulingisa amaqanda wokungqola wokufakelwa, kusuka ku- "Ukulayishwa kwamaqanda - ukuphuka kwamaqanda" nokunye ukusebenza okuzenzakalelayo okuqhubekayo, kuthuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza futhi kunciphise nezindleko zabasebenzi.
Iqanda lokuhlunga nokupakisha umshini
Umshini wokugaya amaqanda nomshini wokupakisha uxhunywe kumaqanda wamakhasimende asenkabeni yeqoqo, noma ungaxhunyaniswa nomshini wokuwasha amaqanda, ukomisa amaqanda, inzalo ye-UV, ukumboza uwoyela, noma ikhandlela leqanda. Ngamandla asukela kuma-30,000eggs / h kuya kuma-60,000eggs / h.
Umshini wokupakisha weqanda we-MT-110D
Ukuchamusela iqanda lokufaka kanye nokupakisha umshini wokuchamisela iqanda noma iqanda elisha, lingazenzela ibanga leqanda bese lipakisha emshinini owodwa.
Amaqanda Wokugaya nokupakisha
a) lo mshini ungaxhunyaniswa namaqanda wokuqoqa i-central system noma umugqa wokukhiqiza amaqanda wokuhlanza. b) ibekwa ngesisindo seqanda bese ipakisha ngokuzenzakalela, ngenkathi ilungisa inqwaba, ilungele ukugcina iqanda; c) Ukusebenza kwesikrini sokuthinta, kungasethwa emazingeni ehlukene wesisindo, kuze kufike emakilasini ayisithupha. d) ilungele u-6 * 5 = 30 amathreyi wephepha noma amathreyi epulasitiki e) ungakhetha ukuthumela okuzenzakalelayo noma ukuthunyelwa ngesandla
Umshini wokugaya amaqanda ngogesi
Umshini wokulinganisa we-Egg elekthronikhi, ungasethwa emazingeni ehlukene esisindo nezibalo zenani lamazinga, ukusebenza kwesikrini nokulawula, okulula nokusebenzayo.
Ukuchamisela Iqanda Packer, Iqanda Ukuhlela Futhi Ukupakisha Machine, Okuzenzakalelayo Egg Breaking Machine, Egg Ukupakisha Machine, Abakhiqizi Bomshini Wokuphula Amaqanda, Umshini Wokubhoboza Iqanda Elibilisiwe,